China Truck Telescopic Hydraulic sịlịnda ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta | Xinrun
Loader Hydraulic sịlịnda
Excavator Hydraulic sịlịnda
Telescopic Hydraulic sịlịnda gwongworo
1.Telescopic haịdrọlik cylinder na-akpọ multi-ogbo haịdrọlik cylinder. Ọ na-emi esịnede abụọ ma ọ bụ multi-ogbo pistin cylinders, tumadi ekewet nke cylinder isi, cylinder gbọmgbọm, uwe, pistin na n'akụkụ ndị ọzọ. Enwere ọdụ ụgbọ mmiri na ntinye nke a na B na nsọtụ abụọ nke gbọmgbọm cylinder. Mgbe mmanụ batara n'ọdụ ụgbọ mmiri a na mmanụ wee laghachi n'ọdụ ụgbọ mmiri B, a na-akwagharị piston mbụ nke nwere mpaghara dị irè karị, mgbe ahụ obere pistin nke abụọ na-agagharị. N'ihi na ọnụego na-abanye n'ọdụ ụgbọ mmiri a na-adị mgbe niile, piston nwere nnukwu mpaghara dị irè nwere obere ọsọ na oke aka, ma ọ bụghị, nnukwu ọsọ na obere nrụgide. Ọ bụrụ na mmanụ dị n'ọdụ ụgbọ mmiri B na nloghachi mmanụ na ọdụ a, pistin nke abụọ ga-alaghachi na isi njedebe mbụ, wee nwee piston mbụ ga-alaghachi
Njirimara nke telescopic hydraulic cylinder bụ: ọrịa strok na-arụ ọrụ nwere ike ịdị ogologo oge, ọ nwere ike belata ma ọ naghị arụ ọrụ. Okwesiri maka oge ebe oghere ntinye pere mpe ma njem a choro dị ogologo, dịka ọganihu telescopic nke tipper truck and crane. Mgbe telescopic hydraulic cylinder gbatịrị nzọụkwụ site na nzọụkwụ, mpaghara ọrụ dị irè na-eji nwayọọ nwayọọ belata. Mgbe ntinye ọsọ ọsọ na-agbanwe mgbe niile, ọsọ ọsọ na-eji nwayọ nwayọ; mgbe ibu mpụga na-adị mgbe niile, nrụgide ọrụ nke haịdrọlik na-amụba nwayọ nwayọ. Mgbatị nke otu telescopic hydraulic cylinder na-arụ ọrụ na-adabere na nrụgide mmanụ, na mgbatị ahụ na-adabere na ịdị arọ nke onwe ma ọ bụ ibu. Ya mere, ọ na-eji na ihe banyere tilting ma ọ bụ vetikal adiana nke cylinder ngọngọ ..
3.a. Njikọ dị n'etiti cylinder na cylinder
E nwere ọtụtụ ụdị nke njikọ dị n'etiti cylinder na cylinder, dị ka njikọ mkpanaka njikọ, njikọ flange, njikọ ọkara mgbanaka, njikọ ịgbado ọkụ. Eldgbado ọkụ njikọ họrọ ebe a. Kinddị
b. Njikọ dị n'etiti pistin na piston rod
Njikọ dị n'etiti pistin na piston rod na-ejikarị usoro njikọ njikọ njikọ na ijikọ njikọ njikọ njikọ. Ọdịdị nke njikọ eriri dị mfe ma dị irè, a na-ejikwa ya; usoro njikọ njikọ kwesịrị ekwesị maka cylinder ahụ na nrụgide ọrụ dị ukwuu na nnukwu vibration nke igwe ọrụ. Ya mere, a na-ahọpụta usoro njikọ njikọta site na ihe dị iche iche.
c. ihe Ihe nchebe nke hydraulic cylinder block
Maka mgbochi cylinder, nrụgide hydraulic, ike igwe na ihe nchekwa niile nwere mmetụta na ngọngọ cylinder. Ndabere nke hydraulic cylinder n'ihi nrụgide dị elu na ọnwụ nke ike ịrụ ọrụ nkịtị na-apụtakarị n'ụzọ atọ: nsogbu ike, nsogbu isi ike na nsogbu qualitative, na nke kachasị mkpa bụ nsogbu ike. Iji hụ na ike nke cylinder ahụ, anyị ga-atụle ihe nchekwa kwesịrị ekwesị
Nke gara aga: Loader Hydraulic sịlịnda
Osote: Car Jack
Ngwongwo ihe eji arụ ọrụ ụgbọ mmiri
Kpofuru gwongworo Hydraulic sịlịnda
Ihe eji arụ ọrụ gburugburu ebe obibi dị ọcha
Hydraulic Flap Telescopic sịlịnda
Product Ihe Hydraulic flaapu bụ ụdị nke oge a ihe onwunwe ebutu ngwá. Ọ bụrụhaala na akwadoro ya, ọ nwere ike ibutu ihe ngwa ngwa na ozugbo. Ibudata arụmọrụ dị oke elu na uzuzu dị obere. Onye na-ekpo ọkụ ahụ kwesịrị ịmalite ụgbọ ala hydraulic iji mee ka ogwe aka nrụgide gbagoo n'ọkwá dị elu, mgbe ahụ, ụgbọala na-ebu ụgbọ ala na-adọkpụ ụgbọ ala gondola zuru ezu, ọ dịkwa na ụgbọ ala ahụ na-akwado ọkụ nke ntụpọ ahụ. The azụ efere vibrator bụ abu ...
Ngwaahịa zuru ezu 1. Ọ bụ anyị bụ ndị isi maka ndị na-egwupụta nnukwu na ọkara. Okwesiri maka ọnọdụ nke nrụgide kachasị nke 350 kgf / cm ^ 2 na ọnọdụ okpomọkụ nke - 20 ℃ - 100 ℃ (nkọwapụta nke mpaghara oyi bụ - 40 ℃ - 90 ℃). Ihe Njirimara 2.a. Obere size, ìhè arọ na elu ike: ihe nhọrọ, ihe nhazi technology na ịgbado ọkụ technology nke cylinder ahụ na pistin mkpara na-adiaha dị ka ike, ike ọgwụgwụ imewe na ad ...
HSG01-E Series Hydraulic sịlịnda
Product Ihe HSG ụdị engineering haịdrọlik cylinder bụ abụọ na-arụ ọrụ otu mkpanaka pistin ụdị haịdrọlik cylinder, nke nwere àgwà nke mfe Ọdịdị, a pụrụ ịdabere na ime, adaba nzukọ na disassembly, mfe mmezi, echekwa na ngwaọrụ na dị iche iche njikọ ụdịdị. Ọ na-bụ-eji na-ewu ígwè, ụgbọ njem, mbupu, na-eweli igwe, Ngwuputa ígwè na ndị ọzọ ọrụ. Nyocha na imewe 1. companylọ ọrụ anyị nwere ndị injinia 6 nwere afọ 20, afọ 40 nke ...
Piston Hydraulic sịlịnda
Ngwaahịa zuru ezu: 1.Hydraulic cylinder bore A ga-ahọrọ oghere ndị na-arụ ọrụ dịka nrụgide ọrụ, ọnọdụ ọrụ, ọnọdụ ọrụ na ihe ndị ọzọ pụrụ iche. 1.1 Cylinder Tube: oyi dọtara nkenke enweghị nkebi nchara tube, na-ekpo ọkụ akpọrepu enweghị nkebi nchara tube, esorowo tube. 1.2 Ihe tube: SAE1020 (20 #), SAE1045 (45 #), 16Mn (Q345B), 27SiMn, wdg. 1.3 Ihu Elu: R0.16-0.32μm 1.4 N'ime Chromating: Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, n'ime tube ga-eme ka ọ chromated. 2. pistin mkpanaka 2.1 mkpanaka ihe: 35 #, SAE1045 (45 #) ...
Ngwaahịa nkọwa 1.Excavator usoro nke abụọ na-eme otu ịwụ ụdị haịdrọlik cylinder na-eji dị ka reciprocating linear ngagharị actuator na excavator haịdrọlik usoro. PC usoro haịdrọlik cylinder bụ ụdị excavator haịdrọlik sịlịnda na-arụ ọrụ pụrụ iche nyochara na arụpụtara site Komatsu na Kayaba technology nke Japan. O nwere njirimara nke nrụgide na-arụ ọrụ dị elu, arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya, nrụnye dị mma na disassembly, mmezi dị mfe na nchekwa nchekwa. Akara niile nke a ...